Tsvuku (Ruvara) - Wikipedia
Tsvuku (ku Chingezi: red) kana dzvuku ruvara pane iyo yakareba wavelength kumagumo kwechiedza, padhuze neranjisi uye yakatarisana nevhiore.
Mavara matsvuku emashizha munguva yeMatsutso.
Zvinhu zvine ruvara tsvuku zvinosanganisa ropa, mastrawberry, marozi nemhiripiri, uye semamwe mavara ruvara tsvuku runoonekwa panguva yekuvira kwezuva.
1 Chirevo kuVashona
2 Zvimwe zvirevo
2.1 Ruvengo, hasha, hukasha, shungu dzerudo, kupisa nehondo.
2.2 Ruvara runobata ziso.
3 Chirevo muhunhu hwevamwe
4 Musainzi nezvisikwa
4.1 Kuita tsvuku (blushing/turning red).
4.2 Mapigimendi nedhayi.
4.3 Zvichero neMavhegi.
4.6 Vhudzi tsvuku.
Jira reRetso rinemucheka une mavara matatu, nhema, tsvuku nechena. Jira iri rakakosha zvikuru kuvanhu vechiShona sezvo rakarukwa mukati menhoroondo yavo. Mucheka uyu unozivikanwa zvisizvo semucheka weMidzimu yemhuri (Vadzimu), zvisinei hazvo iwo mucheka ndewe Shavi rinodanwa muChishona seShavi rekuvhima, kana Hombarume (kana Spirit of the Hunter). Jira reretso rinogona kutengwa munhu wese wese, haudise kuva neShavi kuti ukwanise kutenga jira reretso kana kuripfeka. Pamusoro pezvo, mutsika dzanhasi jira reretso rinogona kutengwa nekupfekwa nechero nhengo ye Vashona. Rinopfekwa munzira dzakawanda, semabhandana, madhuku, uye inogona kushandiswa kugadzira masiketi, marokwe, mudhebhe nehembe uye nezvimwewo.
Ruvara rutsvuku runowanikwawo paMureza yeZimbabwe apo inoshandiswa kumiririra ropa revakashaya, ndiro ropa rakadeurwa neavo munguva yehondo dzeChimurenga. Kune rukudzo paruvara rutsvuku, raishandiswawo seruvara rwekungwarira mune tsika zhinji, mumigwagwa umo pamarobhotsi tsvuku ruvara rwekuti umire pamharadzano.
Ruvara rutsvuku zvakare ruvara rehupenyu, hupenyu hwevanhu sezvo inomiririra ropa simba rehupenyu hwevanhu (pamwe neoksijeni). Ndiwo ruvara rwechishuwo nerudo nekuda kwekuti iri rakajeka nekushinga, uye ruvara runobata ziso.
Ruvengo, hasha, hukasha, shungu dzerudo, kupisa nehondo.Edit
Nepo tsvuku iri iro ruvara rwakanyanya kusanganiswa nerudo, irwo iro vara rinonyanya kusanganiswa neruvengo, hasha, hukasha nehondo. Vanhu vakatsamwa vanonzi "vanoona tsvuku." Tsvuku ndiro ruvara runowanzobatanidzwa neshungu dzerudo (passion) uye kupisa. MuRoma yekare, tsvuku raive ruvara rweMurongazuva (mars), mwari wehondo - chindeya Murongazuva yakatumidzwa kutevera iye nekuda kweruvara rwayo rutsvuku.
Kana vanhu vachivara moyo wakatarwa wanouvara tsvuku kumirira rudo.
Hasha dzinowanzo onekwa setsvuku.
Murongazuva chindeya (Planet mars)
Ruvara runobata ziso.Edit
Tsvuku ndiro ruvara rinokwezva kutariswa. Ongororo inoratidza kuti ndiwo muvara unonyanya kusanganisirwa nekuonekwa, kuswedera pedyo, uye kuwedzererwa. Ndiwo zvakare mucherechedzo unoenderana nesimba uye zviitiko.
Tsvuku rinoshandiswa mumafashoni azvino sezvazvaishandiswa mukupenda kweZvinyakare (Middle Ages); kukwezva maziso emuoni kune munhu anofanirwa kuve ari pakati pekucherechedza. Vanhu vakapfeka zvitsvuku vanoita kunge vari padyo kupfuura avo vakapfeka mamwe mavara, kunyangwe ivo vari varikure. Tsvuku inowanzo pfekwa nevanochengetedza vamwe nevamwe vane basa rinoda kuti vawanikwe zviri nyore.
Nekuti tsvuku inokwezva kutariswa, inowanzo shandiswa mukushambadzira, asi zvidzidzo zvinoratidza kuti vanhu kashoma kuverenga chimwe chinhu chakadhindwa mutsvuku nekuti vanoziva chiri kushambadza, uye nekuti zvinonyanya kuoma kuverenga kupfuura mavara matema nemachena.
Chirevo muhunhu hwevamweEdit
Mutsika dze Vavhiyetinamu, tsvuku ndiro ruvara rwemufaro, rudo, rombo rakanaka, uye kupemberera.
KuJapani, tsvuku ruvara rwechivanhu rwegamba. KuIndiya, ruvara tsvuku rinoonekwa seruvara rwemarokwe evakadzi panguva yemuchato pavanoroorwa.
KuPakati pe Afurika, varwi we Vandembu vanozvikwiza nependi tsvuku panguva yekupemberera. Sezvo tsika yavo ichiona ruvara sechiratidzo chehupenyu uye hutano, vanhu vanorwara vanopendwawo nayo. Kufanana netsika zhinji dze Pakati pe Afurika, Mandembu vanoona kutsvuka sekwakajeka, saka kwavari hutsvuku huri nani kudarika pane kuvamutema, sekuvamuchena. Mune mamwe mativi eAfurika, muvara tsvuku ndewekuchema, unomiririra kufa.
KuChayina tsvuku ( Chichayina chakareruka 红; Chichayina chechinyakare 紅; pinyin: hóng) ruvara rwemucherechedzo wemoto uye kumaodzanyemba (ku Chamhembe cheChayina). Tsvuku inotakura chirevo chekunaka kwazvo, uye ruvara runoonekwa seruvara rwekushinga, kuvimbika, kukudzwa, kubudirira, hupfumi, kubereka, mufaro, shungu dzerudo, uye zhizha.
Indiya rokwe rekuroora itsvuku.
Chinese red bridal dress.
Kuita tsvuku (blushing/turning red).Edit
Chirevo ichi chinonyanya kuvanhu vaneganda rakati chenei, nekuti ndiwo wanoonekwa kana washanduka kuita tsvuku pamatama nyangwe kuchisos chese, kana wanyadziswa, uye kana waripamberi pemunhu wavanoda. Vanhu vaneganda tema havaonekwe kumatama kana vanyadziswa uye kana vari pamberi pemunhu wavanoda.
Oka tsvuku (Red ochre), inoshandiswa sedhayi rinoshandiswa munyika dzakasiyana, kupenda zvinhu. E.g. rock art, kana vhudzi muNamibia
Mashandisirwo eOka Tsvuku (red ochre) kuvara art inoitwa pamatombo.
Ku Namibhiya Oka Tsvuku inoshandiswa kupenda ganda nevhudzi, inonzi Otjize
Husvibu hwe Ranje (Vermilion pigment), inogadzirwa kubva ku Sinabha (Cinnabar).
Papwora tsvuku (red poppy) [papwora izwi rinobva ku Chiputukezi papoula zvichireva kuti poppy)
Amaririsi tsvuku (red amaryllis)
Animoni tsvuku (red anemone)
Merigoridhe tsvuku (marigold)
Kara riri (calla lily)
Mujongwe kana Ruvara remoto (flamelily), ruva renyika yeZimbabwe.
Arowana tsvuku (Red Arowana), ihove inowanikwa kuEzhiya, uye yakakosha nekudhura.
Vhudzi tsvuku, rinotaridzika seranjisi asi rinonzi tsvuku.
Vhudzi tsvuku kuvanhu vatema, rinogona kutaridzika reranjisi nhema.
Vhudzi tsvukutsvuku, dzimwe nguva vhudzi riri ruvara tsvuku kudai rinenge raka dhayiwa (dyed).
enwiki: Red (colour)
Blazermag, 31 May 2020, Howling culture
snwiki: Jira Reretso
papaleng amazing animals, n/a, 10 stunning and gorgeous red animals
Flower glossary, n/a, red flowers
enwiki: Stone age, Zimbabwean Art
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsvuku_(Ruvara)&oldid=91129"
Last edited on 31 Ndira 2022, at 02:54
This page was last edited on 31 Ndira 2022, at 02:54.